Video: Mawduuc ka soo horjeedka Backlinks | Martech Zone
Dad badan ayaa qarash gareeya oo waqtigooda ku iibiya wax ka qabashada websaydhkooda, oo waxay dabaylo u xoqdaan madaxooda marka goob kale ay ka darajo sarreyso laakiin aan la hagaajin. Sababtoo ah hagaajinta mawduucu waa dagaalka badhkiis, waxay helaysaa dareenka bogagga kale ee runtii ku riixaya boggaaga Natiijooyinka Raadinta. Shaqada mashiinka raadinta ayaa ah inay bixiso natiijooyin la xiriira. Haddii boggag kale oo aad loo ixtiraamo ay kuu tilmaamaan oo ay ku yiraahdaan, "adigu waxaad tahay waxaad tahay!", Mashiinnada Goobiddu fiiro gaar ah ayey u yeelan doonaan taas!
Tags: 3ka soo kabtaannatiijooyinka ganacsigacaptchatikniyoolajiyadda kalsoonida lehsamatabbixinlyrisCabir CPdib u qabashada
Tilmaamaha Mawduuca: Iskuxirka Dhiirrigelinta Monroe
Oktoobar 28, 2008 at 12:08 PM
Waxaan u maleynayaa in waxyaabaha ku jira ay aniga iiga fiican yihiin. Wax badan ayaan ka sharaxay tan, Bartilmaameedka bartaada ayaa ah in la helo dad badan oo soo booqda. Marka waa inaad bixisaa oo aad dhajisaa dhammaan waxyaabaha ku habboon ee xiisaha u leh martida ama daawadayaasha. Macluumaadka ku jira balooggaaga ayaa muhiim ah, inta badan ee macluumaadka wanaagsan ayaa ka sii wanaagsan oo bogagga badan ayaa kugu soo xiriiri doona.
Xidhiidhka dhabarka looma cabbiro boggaaga oo fiican. Qaar ka mid ah degellada internetku waxay ku xirnaayeen websaydh kale oo niche laakiin cufnaanta hooseysa pr ama qiimeynta pr ayaa heli karta Qaar ka mid ah sidoo kale boggaga kale waxay isticmaali karaan koofiyad madow hal dariiq isku dhaafsi.
Soo-booqdayaashu waxay helayaan cusbooneysiintii ugu dambeysay ama macluumaad muhiim ah. Badanaa booqdayaashu waxay iska indhatireen boggaga markay furayaan iskuxirka gadaal iskuxiraha markay arkeen inaanay lahayn waxyaabo muhiim ah ama muhiim ah oo kaliya spaming.